CRAIOVA VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
Waxaa caawa ciyaaraya kooxaha Craiova vs AC Milan oo ku ballansan wareegga 3-aad ee Europa League ee loogu soo baxayo guruubyada.
(Craiova) 27 Luulyo 2017 – Milan ayaa ciyaaraysa shaxda 4-3-3 iyadoo uu goolka ku jiro Gigio Donnarumma, afarta daafaca ihi waa Abate iyo Rodriguez oo dadabyada ah iyo Zapata-Musacchio oo dambeedyada ah.
Khadka dhexe waxaa hoggaaminaya Montolivo oo uu wehliyo xiddigga Kessié iyo Bonaventura oo dhanka kale taagan, weerarkuna waa seddexleey ka kooban Borini-Cutrone-Niang. Haddii lasoo gaabiyo waa isla shaxdii kooxda Bayern Munich 3-0 ku hoggaaminaysay gelinka hore kulankii Shenzhen.
Craiova ayaa iyadu uga jawaabaysa shaxda soo jireenka ee 4-4-2; waxaana u safan laacibkii hore ee Juventus ee Fausto Rossi, inta kale sidaa looma yaqaan waxaana ugu khabiirsan kabtan Hristo Zlatinski, oo 10 kulan u saftay qaranka Bulgaria.
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: CS U. Craiova vs AC Milan 0-1 (Milan oo lugta 1-aad guul ku bilowday)